HARIIROO WAL-TUMSUU MMWO FI MMWBG | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa walitti dhufeenyaa fi hariiroo wal hubannoo, wal deeggaruu fi wal cimsuu irratti fuulleffate Manneen Murtii naannolee biroo wajjin uumaa jira.
Haaluma kanaan kana dura hooggansi Mana Murtichaa Mana Murtii Waliigalaa Naannoo Sidaamaa wajjin hariiroo hojii uumuuf gara Magaalaa Hawaasaa imaluun rifoormii Manneen Murtii Oromiyaa gaggeessaa jiran irratti muuxannoo kan qoodeef ta’uun ni yaadatama.
Bifuma wal fakkaatuun guyyaa har’aa (Ebla 1 bara 2013) hooggansa ol’aanaa Mana Murtii Naannoo Beenishaangul Gumuz Pirezidaantii Mana Murtichaa kabajamoo Obbo Abdiisaa Waaseetiin durfamu Magaalaa Finfinneetti simachuun muuxannoo fi rifoormii Manneen Murtii Oromiyaa irratti muuxannoon qoodeefii jira. Kanaan gamattis deeggarsa meeshaalee TQO bifa deeggarsaan gumaacheefii jira.
Waltajjii kana irratti Pirezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, kabajamoo Obbo Gazalii Abbaasimal haasaa taasisaniin Manneen Murtii Oromiyaa rifoormii fakkeenyummaa qabu gaggeessaa kan jiranii fi muuxannoo qaban kana Manneen Murtii Naannoolee biroof qooduuf qophiidha jedhaniiru.
Pirezidaantiin Mana Murtii Naannoo Beenishaangul Gumuz, kabajamoo Obbo Abdiisaa Waasee gama isaanitiin riifoormiin Manneen Murtii Oromiyaa keessa jiran Naannoleerra darbee akkuma biyyaattuu fakkeenyummaa kan qabu waan ta’eef bakka hundatti babal’achuu qaba jedhaniiru. Itti dabalaniis deeggarsa hunda-galeessa Manneen Murtii Oromiyaa taasisaafii jiruuf galata guddaa kan qabu qaban ta’uu ibsaniiru.
Dhuma sagantaa kanaa irratti dhimmoota waloo gara fuulduraa wajjin irratti hojjatamuu qaban kan bitu sanadni wal hubannoo Pirezidaantota Manneen Murtii lamaaniin mallatteeffamee jira.